Sida loo Play AVI on iPhone 5s iyadoo wax dhibaato ah
> Resource > Video > Sida loo Play AVI on iPhone 5s
iPhone 5s kaliya taageeraa jajab yar oo files AVI. Sida saxda hadlayay, waxaa u ciyaara kaliya AVI files leh Motion jpeg sida video codec. Si kastaba ha ahaatee, Motion jpeg video codec ayaa la dhacsan. Si kale haddii loo dhigo, dadka isticmaala ma ciyaari karo AVI on iPhone 5s xaaladaha ugu. Haddii aad iibsaday 5s iPhone, waa lagama maarmaan u ah in aad ogaato sida uu u ciyaaro aad video ururinta AVI qalabka si habsami leh. Nasiib wanaag, qodobkan xallin doono dhibaatadan, si aad u samayn kartaa ugu qalab.
Xalku waa in la badalo AVI in 5s iPhone qaabab si buuxda u taageerto. Halkan, uma baahnid in aad ogaato waxa qaab iyo video codec waa waxa ugu fiican iPhone 5s. Waxaa aad u adag. Waxyaabaha noqdaan si fudud doonaa inta aad isticmaali qalab weyn oo diinta video, kaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah loogu badalo AVI si iPhone 5s u siman loo maqli karo. Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa sida AVI a smart in Converter iPhone 5s. Waxa uu awood u leeyahay inuu u rogo mid ama dhowr files AVI in qalabka la video tayo weyn iyo super si degdeg ah xawaaraha diinta.
1 Import AVI in video AVI si iPhone 5s video Converter
Waxaad geli doonaa "ayuu Beddelaan" interface ka dib markii aad u app this. Markaas, aad arki doonaa a button on dhinaca kore ee bidix ee interface ka. Just waxa guji si ay dajiyaan videos AVI aad rabto in aad ka your computer ah. Hadda, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha AVI ku daray in app this, sida lagu muujiyey jaantuskan hoose.
2 Dooro iPhone 5s sida qaab wax soo saarka
App waxa ku jira presetting ah optimzed u iPhone 5s. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan sida qaab wax soo saarka, iyo files saarka uu noqon doono si buuxda u la jaan qaada qalabka.
Just tagaan dhanka midig ee interface ah, oo waxaa guji image qaabka. Liiska qaab saarka App Tani ayaa arbushin doonaa mar. Next, u tag Device> Apple> iPhone 5s.
Qaabab Beddelaan AVI in 5s iPhone si buuxda u taageerto garaacida ah "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa interface ugu muhiimsan ee barnaamijkan ee. Wax inteeda kale ayaa si toos ah waxaa dhammaan doona this video smart Converter. Dhowr daqiiqo ka dib, waxaad riixi kartaa "Folder Open" doorasho si aad u hesho kuwaas files gediyay, oo markaas iyaga u hagaagsan in iPhone 5s via Lugood.
Hadda, waxaad uun ku istareexaya cajiib ah content warbaahinta AVI ku 5s iPhone qabow waqti kasta iyo meel kasta.